राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने रकमको सीमा घटायो, अब कति रकम निकाल्न पाइन्छ ? – ताजा समाचार
राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने रकमको सीमा घटायो, अब कति रकम निकाल्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । नेपालका एटीएमबाट चिनिया ह्यकरहरुले ठूलो रकम निकालेको घटना बाहिरिएसँगै नेपाल राष्ट्र बै‌कले एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने रकमको सीमा घटेको छ । चिनियाँ ह्याकरले नक्कली भिसा कार्ड बनाई विभिन्न बैंकको एटीएम कार्डमार्फत् करोडौं रुपैयाँ लुटेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने रकमको सीमा घटाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक सर्कुलर जारी गर्दै अब एटीएमबाट एक दिनमा ६० हजार रुपैयाँ र एक पटकमा २० हजार रुपैयाँमात्रै निकाल्न सकिने जनाएको छ । यसअघि एक दिनमा १ लाख रुपैयाँ र एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिन्थ्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रद्धारा हस्ताक्षर भएको निर्देशन अनुसार एटीएमबाट न्यूनतम ५०० रुपैयाँ मात्रै झिक्न मिल्छ ।
प्रकाशित भएको : September 5th, 2019
अर्थ, ब्यानर न्यूज